ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်၏၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
Dec 31, 2018/
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ချိုချို၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နေအိမ်၌ကျင်းပသည့် ခရစ်တော်မွေးနေ့(ခရစ္စမတ်)ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်
Dec 29, 2018/
Dec 20, 2018/
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်မှ အမြဲတမ်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Michael Michalak အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် National Democratic Institute (NDI) ၏ ကနေဒါနိုင်ငံမှ ပညာရှင် Mr. Gerard Latulippe အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Alessandra SCHIAVO အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ကြက်ခြေနီ အသိပညာပြန့်ပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Utut Adianto Wahyuwidayat ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ